Siyaasiga C/raxmaan c/shakuur oo Walaac ka qaba isku milanka Dhanka ciidamada.
Hogaamiyaha xisbiga wadajir C/raxmaan Cabdishakuur warsame ayaa sheegay inuu qabo Walaac xoogan oo dhanka isku milanka ciidamada ah.
Qoraal uu soo saaray Hogaamiyahaan Mucaaradka ah ayaa u qornaa sidaan.
Waxaan walaac xoog leh ka muujineynaa isku milanka Taliska Nabadsugidda (TN), iyo Taliska Ciidanka Xoogga Dalka (CXD).
Waxaa soo baxaysa in taliyaha CXD uu toos uga amar qaato TN. Amarrada xil ka qaadis, dalacsiin, shaqo ka joojin, iyo beddelaad ee maalmihii la soo dhaafay CXD ka dhex socotay waxay ahaayeen kuwo u adeegaya dano siyaasadeed, eex qabiil iyo ku takrifal awoodeed.
« Madaxweyne Farmaajo iyo Saarkiil Mareykan ah oo Garoonka ku shiraya.
Madaxweynaha Galmudug oo gaaray Baydhabo (SAWIRO) »